अब २ कार्य दिनमात्रै बाँकी रु. १०० मै ११ लाख ५० हजार कित्ता शेयरमा आवेदन दिने, कहाँबाट आवेदन दिने ? - Dainikee News::
अब २ कार्य दिनमात्रै बाँकी रु. १०० मै ११ लाख ५० हजार कित्ता शेयरमा आवेदन दिने, कहाँबाट आवेदन दिने ?
काठमाडौं, कात्तिक २३ । स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत असोज २३ गतेदेखि निष्काशन गरेको सतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको थियो । स्वदेशीले हकप्रद भर्ने अन्तिम म्याद कात्तिक २६ गतेसम्म तोकेको थियो । अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १०० प्रतिशत हकप्रद भर्न २ कार्य दिन मात्र बाँकी रहेको छ । अहिले तिहार विदा परेकाले अब कात्तिक २५ गतेमात्र कार्यालय खुल्नेछ । यसकारण लगानीकर्ताले अब २ दिन मात्र स्वदेशीको १०० प्रतिशत हकप्रदमा आवेदन दिन पाउनेछन् ।
लघुवित्त कम्पनीले विक्री गरेको हकप्रद शेयर कात्तिक २६ गतेसम्म भरिसक्नु पर्नेछ । लघुवित्त कम्पनीले शतप्रतिशत अर्थात १ः१ अनुपात दरले रु. १०० अंकित मूल्यमा ११ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद बिक्री गर्न लागेको हो । लघुवित्तले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुंजी पुर्याउने योजना अन्तर्गत हकप्रद बिक्रि गर्न लागेको हो ।
एनआईसी एशिया क्यापिटललाई हकप्रद शेयर निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकको रुपमा नियुक्ति गरेको छ ।
हाल स्वदेशीको चुक्ता पुँजी ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । हकप्रद बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी २३ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर नेपाल रेटिङ्सले स्वदेशीको हकप्रदलाई केयर–एनपी आइपीओ ग्रेड ४ रेटिङ दिएको छ ।
यता, स्वदेशीले हकप्रदपछि कायम पुँजीमा दिने भनेको १० प्रतिशत नगद लाभांश भने रद्द गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा यस लघुवित्तले ३ करोड ७७ लाख १८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । प्रतिसेयर आम्दानी ३१ रुपैयाँ ८ पैसा रहेको यस कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १४३ रुपैयाँ ७८ पैसा छ ।
लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटल थापाथली काठमाडौं तथा स्वदेशीको सम्पूर्ण शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यसैगरी, सी–आस्वामा सहभागी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि हकप्रद भर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक २३, २०७५ /Friday, November 9th, 2018, 10:41 am